Xildhibaanadii Mooshinka ka Keenay farmaajo oo Eedaymo Horleh Soo Saaray iyo Dilal Qorshaysnaa oo uu ku qaaday siyaasiyiin caan ah, | Biyoguurenews.com
Home Faallooyin Xildhibaanadii Mooshinka ka Keenay farmaajo oo Eedaymo Horleh Soo Saaray iyo Dilal...
Xildhibaanadii Mooshinka ka Keenay farmaajo oo Eedaymo Horleh Soo Saaray iyo Dilal Qorshaysnaa oo uu ku qaaday siyaasiyiin caan ah,
xildhibaanadii dhawaan mooshinka ka keenay madaxweyne Farmaajo ayaa mar kale soo bandhigay eedaymo culus oo u jeediyeen madaxweynaha.
Xildhibaanada oo hore u shaaciyey inay ka noqdeen mooshinkii ay ka keeneen madaxweynaha ayaa haatan soo bandhigay dhibaatooyin ay sheegeen in Farmaajo uu ka gaystay soomaaliya mudadii uu talada hayey.
Xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowaa oo hore-na xilal uga soo qabtay dawlada ayaa madaxweynaha ku eedeeyey inuu carqalado badan u horseeday maamulada dalka isla markaana weeraro ku qaaday siyaasiyiin mucaarid ah.
Xildhibaan Odowaa oo eedaynaya madaxweynaha ayaa yidhi “Madaxweynaha hadda tallada haya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dawladda uu hoggaamiyo oo xilka hayey mudo ku dhaw labo Sano waxaa
uu mashquul ku ahaa weerarrada maamul gobolleedyada isaga oo ku bilaabay Cali Cabdullaahi Cosoble, wuxuu ku xigisiiyey Xaaf ugu dambeyntiina Shariif Xassan Sheekh Aadan ayuu weerar siyaasadeed ku qaaday.”.
Sidoo kale eedaymaha ay xildhibaanadu soo jeediyeen madaxweyne Farmaajoweerarro lagu qaaday siyaasiyiinta, sida C/raxmaan C/shakuur, weerarkii Cabdi Qeybdiid, sidoo kalana u gacan galiyay dowladda Itoobiya Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax.
Xildhibaan Odawaa ayaa sheegay in dowladda hadda jirtay ay soo kordhisay wax uu ugu yeedhay (Gar iyo Gardaro) oo xilka lagaga tuuray ayuu yidhi guddoomiyihii hore ee Golaha Shacabka Maxamed Cismaan Jawaari iyo qaar ka mid ah madaxda dowlada goboleedyada.
Waxaa kaloo eedeymaha ku jirtay kala diridii Guddiga Maaliyadda oo ay xuseen xildhibaannadu in aysan dhicin mid la mid ah illaa sanadkii 2000 oo la soo dhisay dowladdii Carte in la kala diro Guddi Baarlamaani ah, oo soo bandhigay warbixin musuq maasuq iyo lacago maqan, meeshii la filayay inay jawaab ka bixiyaan ay sababtay in ay kala diraan Guddiga Maaliyadda, lana soo saaro warqado sharci darro ah.
“Madaxweynuhu waxaa uu magaalada Baydhabo isaga oo adeegsanaya ciidamo shisheeye uu ka soo afduubay Mukhtaar Rooboow Abuu-Masuur oo aan ognahay in uu isaga laftirkiisa siiyay Basaboor Diblomasi ah, una diray magaalada Baydhabo” laakiin markii uu ka waayay danihiisa si qasab ah u soo xiray’’ ayuu yiri Cabdiraxmaan Odawaa.
Ugu danbeyntii xildhibaannada ayaa shirkooda Jaraa’id waxaa ay ku sheegeen in sababta ay mooshinka uga laabteen tahay in ay u tureen danta dalka iyo dadka, maadaama uu garan waayay madaxweynuhu inuu dalka badbaadiyo sida ay warka u dhigeen.
Previous articleXasuuqii Burco Ka Dhacay 20/12/084 oo lagu laayay alle ha u naxaristo e 43 oday oo ahaa indheer garadkii burco oo la ogaaday cidii qortay warqadii dilka loogu fuliyay,
Next articleSomaliland Oo Ka Hadashay Isbahaysi Ay Sameysteen Dalalka Ku Yaalla Badda Cas Iyo Gacanka Cadmeed